XASAASI + DHAGEYSO: Somaliland oo u hanjabtay Puntland, jawaab adagna ka bixisay eedeyntii loo jeedayay (Maxaa soo kordhay?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XASAASI + DHAGEYSO: Somaliland oo u hanjabtay Puntland, jawaab adagna ka bixisay...
XASAASI + DHAGEYSO: Somaliland oo u hanjabtay Puntland, jawaab adagna ka bixisay eedeyntii loo jeedayay (Maxaa soo kordhay?)
Hargeysa (Halqaran.com) – Somaliland ayaa jawaab kulul ka bixisey eedeyn uga timid dowlad goboleedka Puntland oo ku aadan in uu taageero siiyo maleeshiyaadka hubeysan ee Al-Shabaab, ayna duulaan ku yihiin degaannada dowlad goboleedkaasi.
Abaanduulaha 1-aad ee ciidamada Somaliland, Cabdirisaaq Saciid Bulaale, oo warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargeysa ayaa waxa uu ku tilmaamay eedeyntaasi mid aanan waxbo ka jirin.
Dhinaca kale, isaga oo fal-celinaya hadal kasoo yeeray taliye reer Puntland ah, kaasoo ka shan-qariyey in ay dagaal ku qaadayaan Somaliland ayaa dhinaca kale wuxuu Bulaale ku sifeeyay wax aanan loo baaheyn.
DHAGEYSO: Madaxweyne Koonfur Galbeed oo hor-dhigay RW Kheyre Saddex arrimood uu ka doonayo in loo fulayo. (Maxay yihiin?)
DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Wafdigii Beesha Garxajis oo Hargeysa ku soo noqday, War cusubna ka sheegay arrinta Korneyl Caarre iyo dagaalkii Sanaag.
DAAWO SAWIRRO: Sidee RW Kheyre loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo? +(Ogow Ujeedka Safarkiisa)?
XOG CUSUB: Madaxweynaha Kenya oo sheegay inay dowladiisa ku fashilantay kiiska dacwadda badda!
Abaanduule Cabdirisaaq Saciid Bulaale, wuxuu wacad ku maray in ay Puntland ka qoomameyn doonto hadii mas’uuliyiinteeda ay deegaano kamid ah Somaliland cagahooda soo geliyaan, sidda uu hadalka u dhigay.
Si kastabaa, Mr. Bulaale ayaa carabka ku adkeeyay in degmada Baran ay kamid tahay dhulka Somaliland, isagoona meesha ka saarey hadal kasoo yeeray sarkaalka ka tirsan ciidamada Somaliland.
Halkan Hoos ka dhageyso Codka taliyaha:
Xafiika Halqaran.com, Hargeysa
duulaanka gobolka Sanaag
Somaliland oo u hanjabtay Puntland
axmed September 7, 2019 At 19:40
Waxaasi waa dhuuso, wax idinka yaal la garan mayo sool iyo sanaag, Xabbad baa la idin kaga saari, waadna arki doontaan, Somalina idinma rabto meeshiina jooga, Gebiley baan idin geyneynaa.